ध्वनि संग काम। को HDMI मार्फत आवाज
1 एक HDMI के हो
यो इन्टरफेस एक मल्टिमिडिया ढाँचामा डेटा प्रसारण गर्न डिजाइन गरिएको छ। तपाईं एनालग र अडियो र ध्वनि सहित डिजिटल डाटा, हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ। HDMI मार्फत र यो आवश्यक छ कि ध्वनि प्रशोधन गर्न सक्ने क्षमता विचार गर्नुहोस्।
संचार इन्टरफेस लागि2सेट
- HDMI एडप्टर;
3. जडान - प्रक्रिया
पहिलो, निकासी गर्ने HD2000 वा उच्च एडप्टर मार्फत गरिने निश्चित गर्नुहोस्। अडियो उत्पादन उच्च गुणस्तर को लागि एक shielded केबल एडप्टर आवश्यक हुनेछ;
ध्वनि HDMI मार्फत उत्पादन हो जो देखि एडप्टर, एक निर्मित उत्पादन छ भने, त्यसपछि एडप्टर आवश्यक छैन;
कहिलेकाहीं मल्टिमिडिया टर्मिनल चिप एडप्टर मा एकीकृत हुन सक्छ। अन्य अवस्थामा, यो छुट्टै निस्कनुहोस् DVI मा समाप्त (पहेंलो अंकन) प्रयोग गर्नुहोस् एक क्रस-माथि केबल;
को एडप्टर अति मिल्ने उपकरणहरू लागि मानक पूरा गर्दैन भने, HDMI को ध्वनि प्वाल छैन। तर तपाईं टिभी को उपयुक्त इनपुट एक पीसी देखि अडियो उत्पादन को लागि एक नियमित एनालग केबल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आधुनिक टिभी उपकरण पनि डाटा को लागि एक निजी प्रवेश "ध्वनि" र "भिडियो" प्रदान गरिएको छ;
विभिन्न एडेप्टर लागि सिरियल एडेप्टर को एक चयन आउँछ। उदाहरणका लागि, HD2000 श्रृंखला मा 6141054300G / प्रका केबल अंकन प्रयोग ए HD3000 श्रृंखला कार्ड HDMI 6140063500G / प्रका लेबल खरानी केबल प्रयोग, ध्वनि रू बी को HD4000 मानक अन्तर्गत पनि खैरो 6140063501G / Rev.A मार्कर (बी) संग उपयुक्त एडप्टर केबल छ।
4 जडान? ध्वनि HDMI मार्फत कसरी स्थापित गर्न
जडान भएपछि, सही कन्फिगर गर्न चाहनुभएको ध्वनि। कसरी यसलाई के गर्ने?
ध्वनि कार्ड पीसी लागि आवश्यक प्रदर्शन चालक। आफ्नो कम्प्युटर धेरै अडियो एडेप्टर छ भने, HDMI चिप पूर्वनिर्धारित उत्पादन सेट।
तपाईं ध्वनि विभाग तोड्न र विभिन्न व्यक्तिगत बोर्डहरू प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, मुख्य नक्शा प्रदर्शित इन्टरनेटबाट ध्वनि वा भिडियो खेल, र चलचित्र हेर्दै - HDMI उत्पादन संग एक कार्ड मा। यो गर्न, मिडिया प्लेयर इन्टरफेस अडियो पुनप्रेषण समर्थन गर्नुपर्छ।
5 टिभी र इन्टरफेसको कन्फिगरेसन
ध्वनि को HDMI समर्थित टेलिभिजन उपकरण सामान्यतया HDMI भन्दा मानक ध्वनि प्रदान मार्फत सुन्न। अन्य अवस्थामा जडान गरिएको उपकरणहरूको एक श्रृंखला तिनीहरूलाई केही यो ध्वनि रिपोर्ट पहिचान हुन सक्छ। मलाई यो मामला मा भनेर सम्झाउने गरौं:
तपाईं अनुरूप इन्टरफेस अडियो मा मार्फत टिभी अडियो मा "प्रविष्ट गर्नुहोस्" गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई त्यहाँ धेरै छन् भने, HDMI कनेक्टर अर्को छ इनपुट, गर्न अडियो केबल जडान गर्न उचित छ।
टिभी गर्न कम्प्युटरबाट केबल को दोस्रो अन्त जोडिएको छ ध्वनि कार्ड पीसी (अडियो बाहिर)। यो जडान विधि HDMI मार्फत एक ध्वनि प्रदान गर्दैन।
कहिलेकाहीं टीवी टर्मिनलहरु SCART संग सुसज्जित छन्। र रिपोर्टिङ इन्टरफेस संकेत स्रोत प्रदान गरिएको छ भने, तपाईं जहिले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ , SCART-आरसीए एडप्टर।
त्यहाँ एक साथ विभिन्न निर्देशनहरू देखि आपूर्ति अडियो र भिडियो साझेदारी गर्न सक्दैन भनेर टीवी छन्। यस्तो अवस्थामा यो सांगीतिक फसल, यो एक अडियो एम्पलीफायर छ (कुनै छ भने) प्रयोग गर्न सम्भव छ।
पछाडि भित्तामा तपाईं औक्स वा आरसीए पाउन सक्नुहुन्छ, र संकेत फिर्ता ल्याउन।
स्टेरियो ध्वनि स्रोत भने, सार्वभौमिक खेलाडी प्रायः फूल "सेतो" मा छुट्टै अडियो छ - सही च्यानल लागि, खैरो - बाँया च्यानलको लागि "आगमन"।
पनि सांगीतिक इनपुट मा। खेलाडी, तपाईं मौका छ भने, र केन्द्र मा, र पीसी मा छुट्टै केबल र भिडियो संकेत फाइल गर्न सक्छन्। यो संकेत त्यसपछि टिभी interfacing लागि भिडियो उत्पादन गर्न पुन: निर्देशित गर्न सकिन्छ।
एक विशेष संकेत कनवर्टर पुरानो एनालग टीभी प्रकार (कन्सोल) को लागि खरिद गर्न सकिन्छ। र यो मार्फत आवश्यक manipulations पूरा गर्न, निर्देशन, पढ्नुहोस्।
6 चेतावनी र सावधानी
शक्ति बन्द हुँदा सबै सही प्रदर्शन। केबल एक विशिष्ट सकेट मा फिट गर्दैन भने, जबरजस्ती गर्न यो बल छैन। यी connectors, को संभोग उपकरणहरू को प्रबेश र बहिष्कार फिट कि सकेट टिप्न।
MFP सैमसंग SCX-4220: आफ्नो सानो कार्यालय वा सानो कार्यसमूह लागि सही समाधान
Multivarka मा पाकेका आलु - केही मूल व्यञ्जनहरु
गर्भावस्था को समयमा Faringosept
खमीर आटामा कसरी बेलिशिको पकाउने?
Laktogel: समीक्षाहरु। "Laktogel": अनुप्रयोग, मूल्यहरू, निर्देशनहरू
कसरी गर्दा लागि एन्टी-भाइरस असक्षम?